Mmemme dị irè na usoro ịme ihe maka ndị agadi dara | Ngwọta OMG
Mmemme dị irè na usoro atụmatụ maka ndị agadi dara
A na-atụ aro ya na ị ga-echebara ọnọdụ ahụ ike na ọkwa dịịrị onye agadi ahụ echiche tupu ya ekwuo usoro mgbochi ọdịda. Maka ndị agadi na-ekpuchi ihu dị egwu nke ịda ada, a na-atụ aro ka a na-akwado ọtụtụ ihe ọtụtụ mmadụ. Maka ndị agadi na-ekpuchi ihe ize ndụ dị njọ nke daa, a na-atụ aro ka a na-akwado onye na-akwadoghị ọtụtụ mmadụ. Maka ndị agadi na-ekpuchi anya na ọ ga-adaba na ha (ma ọ bụ na ọ gaghị), itinye aka n'ihe gbasara ahụike ma ọ bụ nchedo nchebe ma ọ bụ usoro mgbochi mbụ bụ nkwa. A na-enye ndị agadi ndị na-ahụ naanị ihe ndị ahụ ohere machibido ya ma ọ bụ dị ala. Usoro mmepe nkwụsị ga-elekwasị anya n'ihe ize ndụ ndị na-emeghachi omume n'ụzọ dị irè, nke ga-eme ka ụda daa.
N'agbanyeghị oke nsogbu nke ịdaba na ndị agadi na ọdachi ụfọdụ ha na-akpata n'oge ụfọdụ, enwere nchekwube. N'ezie, usoro mgbochi mgbochi egosipụtara na ha dị irè: ndị agadi na-erite uru site na mmemme ndị a dị ntakịrị karịa ndị na-adịghị, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọgwụ na-ebelata ma ha enwekwaghị ike ịrụ ọrụ nke onwe ha (Tinetti, Baker et al., 1994 ; Campbell, Robertson et al., 1997; Gillespie, Gillespie et al., 2003). Ọnọdụ ihe ọmụma ugbu a na-enye ohere maka nkwekọrịta onye ikwu na ụdị mmemme ndị dị irè, mana ọ naghị enye aka maka njikarịcha ọdịnaya ha na ụzọ ntinye iji nweta nsonaazụ kachasị mma. Ozokwa, ọ bụ ezie na mmepe ndị na-ezubere ihe ndị dị mkpa egosiwo ugboro ugboro na ha dị irè, ndị a na-atụle omume ma ọ bụ ihe gburugburu ebe obibi ugbu a adịghị akwado ya na akwụkwọ. Ntụle ndị dị na Nduzi a gụnyere akwụkwọ ndị kachasị ọhụrụ (Feder, Cryer et al., 2000; National Aging Research Institute, 2000, American Geriatrics Society et al., 2001; SSMG, 2001; Campbell, 2002; Gillespie, Gillespie et al , 2003; Tinetti, 2003). Na nlekọta ahụike ọha na eze, kọmitii na-ahụ maka nlezianya na-echekwa nrụpụta ọrụ na njiri ike na-eme ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa na mmemme nke na-elekwasị anya na ndị agadi na-ebute ọdịda kachasị njọ na ịdaba na inweta nsonaazụ kacha mma. Ọnọdụ a nwere ike ịmepụta ihe ndị na-adịghị mma na ụfọdụ nkwubi okwu ndị dị na akwụkwọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, Gillespie et al (2003) kwubiri na mmepụta nke multifactorial ahaziri dị irè maka mbelata nke ma ndị agadi nwere ihe ize ndụ mara na ndị agadi na-enweghị ihe ọghọm mara. Kọmitii ndị isi na-atụ aro na ị ga-ebute usoro ihe omume a na ndị agadi nwere nnukwu nsogbu nke ịda. Ihe ndị a na-esi ike ịmepụta ma mee ka ọnụ ọgụgụ nke ndị ọkachamara na ahụike na ndị ọkachamara na-arụkọ ọrụ ọnụ; nyocha emere ka egosiputa na enwere ike hazie ha maka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị agadi kwa afọ. Nkọwa ziri ezi nke ndị okenye kachasị ike ga-ekwe ka ebumnuche nke ọrụ ndị a na ndị kacha mkpa ha.
Ọkwa na ihe profaịlụ nke onye agadi ga-ekpebi ụdị ihe enyemaka iji mejuputa. N'ihi ya, a na-atụ aro ka ịmepụta nyocha abụọ dị mfe tupu ịkọwa onye agadi ahụ maka usoro ọ bụla mgbochi ọdịda (American Geriatrics Society et al., 2001). Nchọpụta nke a na-achọpụta akụkọ ihe mere eme nke ọdịda ma nyochaa nha anya. Dịka nsonaazụ ya si kwuo, onye agadi ahụ nwere ike ịdabere n'ebe a na-emeghị ihe ọ bụla iji nweta ahụ ike zuru ezu, ihe enyemaka dị iche iche ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-emechibidoro iji nweta ihe ize ndụ.
Ndị mmadụ na-enweghị akụkọ ihe mere eme nke ịdaba na afọ gara aga na oge na-adịghị mma Timed up & go (TUG) na-eweta nsogbu dị ala (ma ọ bụ mba) nke ịda. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ọdịda agaghị eme eme n'ọdịnihu ma ọ bụ na ọnọdụ ha agaghị agbanwe. A na - atụ aro ya ka - - na - enyocha nsogbu ịda (otu ugboro n'afọ); - nyocha na ihuenyo maka ụfọdụ ihe dị mkpa dị mkpa ejiri gbochie itinye aka na ntanetị, dị ka:
- ihe ojoo na ulo,
- ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ bụ nnukwu ọrịa;
- mee ka ndị okenye a na ndị nọ ha nso na-eme ihe omume ahụ ike na nchekwa. E nwere ọtụtụ ihe ndị na-akpata ọdịda na njedebe. N'ihi ya, mmemme e mepụtara maka ndị agadi na-enwe nsogbu ọdịda dị ala (ma ọ bụ enweghị) ọ bụla mgbe ọ bụla ọ ga-ekwe omume mee ka ahụike nke onye agadi ahụ. E nwere ike ịmepụta ọtụtụ usoro iji kwalite ahụike na nchebe nye ndị agadi. Otú ọ dị, data banyere mmetụta nke usoro ndị a dị ugbu a, banyere ma ha emetụta ahụike nile nke ndị agadi na mmetụta ha na ibelata ihe mberede na ọdịda.
Ndi okenye na ndi di ha nso kwesiri inye ha ihe omuma nke ndi sayensi bu ihe omuma banyere ihe ndi nwere nsogbu na ihe ngbochi, ma ghota ha banyere oru ahuike nke nwere ike inye nduzi. A ghaghị ịgba ụfọdụ omume ndị nwere mmetụta dị mma na ọrịa mgbochi ọrịa na ịda mbà: - mmega ahụ; - nri nri zuru oke na mmanya dị obere; - iji ezi ọgwụ eme ihe n'ụzọ ziri ezi; - nchekwa n'ime ụlọ. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ nkwurịta okwu n'isiokwu ndị a na-elekwasị anya na ndị agadi bi kpọmkwem na ha nwere ike iji mee ihe dịka ndị na-akwado ma ọ bụ ndị ogbugbo mgbe ha na-agba izu. A na-atụ aro ka ị jiri ọtụtụ nkwado na okwu iji mee ka ndị agadi kwekwuo ozi ahụ.
Iji nye ihe atụ ole na ole, na France, INPES emepụtala broshuọ abụọ nke isiokwu ya bụ "Aménagez gị maison pour avoid les chutes" 14 na "okwu na-echekwa nwa ya mgbe 60 afọ" 15. Onye mbụ na-enye ozi gbasara ịhazi ụlọ iji zere ọdịda na-agụnye usoro onwe onye maka ịnọgide na-enwe nguzozi na ịdị mma nke ndụ. Nke a na-enye ndụmọdụ maka ịnọgide na-eri nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ. Ọzọkwa, Cres of Lorraine mepụtara, "Aînes, actors de leur santé" 16, ngwá ọrụ nkuzi na-elekwasị anya n'ịkwalite na imeziwanye ahụike na mmekọrịta mmadụ na ụwa na ndị agadi. Na Switzerland nke na-asụ French, OMSV (Office medico-social vaudois) nke Lausanne emepụtala "Nkwekọrịta na-edozi", nke na-enye ndụmọdụ na nkwụsịtụ na ịdakwasị ihe ọ bụla na-eme kwa ụbọchị.
Nzuzo 10811 3 Echiche Taa